Rasaasa News – Ma Qusulaa Mise Gudoomiyeyaal Jaaliyad?
on February 17, 2014 4:07 am
Copenhagen, Feb 17, 2014 – Heshiisyadii nabadeed ee ay wada galeen Atoobiya iyo ururadii mucaaradka sanadkii 2010, waxaa ka mid ahaa in dadka Somalida ah laga qayb galiyo maamulka dhexe ee Atoobiya, dhaqaalahana loo kordhiyo si looraaciyo degaanka Atoobiya inteeda kale.
Raysal wasaare Meles Zenawi ayaa si uu mudo u qanciyo codsigaas magacaabay dhawr xubnood oo isugu jira diplomaasiyiin iyo wasiiro.
Runtii magacaabistaasi waxay ahayd uun afka baarkiisa, mudo ka dibna waxaa laga wareejiyey xilalkii loo magacaabay wasiiradii iyo ku xigeenadii, oo kolkii hore 5 ahaa, waxaa mudo gaaban laga dhigay wasiir iyo wasiir xigeen aan awood lahayn.
Qusulada la magacaabay ma wataan magaca qusul, kolka laga hadlayo tirada diplomaasiyiinta ka shaqeeya safaaradaha dibada. Laakiin Jaaliyada waxaad ka maqli iyaga oo leh hebel waa qusul iyo qusulkaan u tagayaa.
Qusulada Somalida Atoobiya waxaa soo magacaaba Madaxwaynaha Ismaamulaka, isaga ayaana shaqada ka qaadi kara. Meesha kolka uu wato masuulku darajada diplomatic ay magacawdo wasaarada arimaha dibadu, badalka iyo shaqadiisana ay masuul ka tahay iyadu.
Qusulada Jaaliyaadka Somalida Atoobiya, shaqadooda ugu badani waa abuurida xidhiidhka Jaaliyada Somalida. Qaar ka mid ahaa Qusulada Jaaliyaadka oo kolkay arkeen in ayna boos ku lahayn safaarada iskaga tagay ayaa jira, sida Maraykanka, Jarmalka iyo Ingriiska. Laakiin qaarkood ayey tabartoodu tahay kuna faraxsan in ay Jaaliyaadka Jaajuusan kolkii ismaamulka looga yeedhan arka. Kuwaas oo ah kuwa aan wax aqoon ah lahayn laakiin afkaXabashiga uun bartay sida masuuliyiin badan.